दमका रोगीले के खाने ? - Paschimnepal.com
दमका रोगीले के खाने ?
दीर्घ दमरोगीमा सास फेर्दा सक्रिय हुने मांसपेसी विभिन्न कारणले कमजोर हँुदै जान्छन् । खाना खाँदा दम बढ्नु, पाचन प्रणाली कमजोर हुनु, खानामा रुचि घट्नुजस्ता कारणले बिरामीले आवश्यक मात्रामा खाना खान सक्दैनन् । फलस्वरूप शरीरसँगै प्रतिरोधी क्षमतासमेत कमजोर हुँदै जान्छ । जसले गर्दा रोग निको हुन समय लाग्ने हुन्छ । तसर्थ, दम रोगका बिरामीले खानपानमा विशेष ध्यान दिन जरुरी हुन्छ । उनीहरूका लागि यस्तो खानपान आवश्यक छ ।
खानामा अरुचिका कारण बिरामीमा तौल घट्दै जान्छ । पर्याप्त खानेकुराको अभावमा शरीरलाई आवश्यक शक्ति आर्जन गर्न मांसपेसी बढी प्रयोग हुन्छन् । जसले गर्दा कमजोरीपन हुन्छ । तसर्थ, दैनिक प्रशस्त मात्रामा शक्ति दिने खानेकुरा खानुपर्छ ।
आवश्यक मात्रामा चिल्लो
प्रकाशित मितिः सोमवार, जेष्ठ २७, २०७६ 6:39:51 PM
Prevकम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोमबाट बच्न एन्टिग्लेयर चस्मा
Nextनिद्रामा झस्कने समस्या किन हुन्छ ?